Vest sy tampon-tanky → Akanjo miasa • amboradara solosaina P&M
Azo ampiharina sy mety kamizelki no vahaolana tonga lafatra amin'ny vanim-potoana rehetra. Ny fahaizany manovaova dia mamela azy ireo hiaraka ampahany amin'ny fahavaratra ary sweatshirts amin'ny ririnina. Manolotra anao izahay palitao asa ary palitao fampitandremana vita amin'ny fitaovana avo lenta.
tsy misy tanany manome insulation hafanana, manome fahalalahana mihetsika, ary noho ny paosy azo ampiharina, mamela anao hitondra ireo zavatra ilaina izy ireo. Ireo fiasa azo ampiharina ireo dia mahatonga azy io ho akanjo ankafizin'ny mpampiasa orinasa sy andrim-panjakana maro.
Manolotra modely maro karazana avy amin'ny A.dler, Stedman, Reis ary Leber & Hollman. Karazan-loko, habe ary fananana marobe no mahatonga ny fampiasana palitao malaza ho akanjo fiasana, fa koa akanjo manokana.
Ho an'ny mpiasa fanamboarana sy fanamboarana dia manome soso-kevitra amin'ny akanjo misy paosy marobe izahay, indrindra ilaina amin'ny fitahirizana entana madinidinika. Ny fitafiana mitazona ny faharetany mandritra ny fotoana lava noho ny fampiasana fitaovana avo lenta.
Ny vokatra dia vita, ankoatry ny hafa vita amin'ny landihazo sy polyester, ny sasany koa manana fanitsiana fanampiny. Ho an'ireo olona miasa amin'ny toe-javatra mampidi-doza dia manome palitao fiarovana izahay amin'ny loko fampitandremana misy singa taratra.
Akanjo fampitandremana ireo dia akanjo fiarovana manokana izay mampitombo ny fahitana. Ho fanampin'izany, ireo kasety taratra voahary dia nanjary fahitana tsara kokoa amin'ny toe-piainana sarotra. Ampiasaina betsaka amin'ny mpiasa an-tanana, ny solontenan'ny serivisy amin'ny arabe, ny lozisialy, nefa koa eo amin'ireo mpitia fanatanjahan-tena, mpandray anjara amin'ilay diabe, mpizahatany ary ankizy mianatra sy tanora.
Ny vokatray dia mifanaraka amin'ny fenitra ara-dalàna takiana. Rehefa mifidy palitao dia ilaina ny manitsy azy tsara amin'ny haavonao, satria ny tadin'ny taratra dia tokony ho eo amin'ny haavon'ny jiro fiara. Ny fatiantoka ratsy dia hiteraka fiasa kely kokoa noho ny fiovan'ny singa taratra.
Ny haavon'ny haavo amin'ny vesatra dia fehezin'ny fenitry ny EU EN 471: 2003, izay manavaka ny haavon'ny fahitana telo:
1, miaraka amin'ny mari-pahaizana ambany indrindra amin'ny fahitana, tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny fifamoivoizana an-dàlana,
2, miaraka amin'ny haavon'ny fahitana, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny akanjo fiarovana,
3, ny akanjo fahitana avo indrindra misy tsipika taratra maro miaraka amin'ny sakan'ny 5 sm kely indrindra.
Ao amin'ny fivarotanay dia manolotra akanjo avo lenta avo lenta mifanaraka amin'ny fampiasana any am-piasana izahay.
Manana isika tampon-tanky orinasa toa an'i Adler sy Leber & Hollman.
Manolotra maodely mahavariana natokana indrindra amin'ny lohataona sy fahavaratra isika ary modely voahidy hampiasaina amin'ny fararano sy ririnina.
Miankina amin'ny fombany, azonao atao ny misafidy kinova misy paosy maro hanamorana ny asan'ny, ohatra, fitters na elektrisianina. Ny tampon'ny tank dia mety amin'ny hetsika andavanandro, manampy amin'ny hafanana. Ny loko misy, ao anatin'izany ny camo, dia ahafahanao manamboatra azy ireo amin'ny toe-javatra sy ny safidin'ny tsirairay, ohatra ho an'ny mpandala ala na manjono.
Ny tampon'ny tanky dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, amin'ny ankapobeny misy sosona polyester ivelany miaro amin'ny rivotra na ny orana. Modely maro no manana vozon'akanjoko miaro ny fiarovana azy amin'ny hatsiaka.
Ho an'ny tena manokana hahazo laza
Mpanjifa maro no mankasitraka izany maha-olona sy manokana, indrindra raha manao asan'ny solontena ny mpiasa amin'ny fifandraisana amin'ireo mpifanaraka sy mpanjifa mety.
tsy misy tanany miaraka amin'ny pirinty dia safidy mahazatra amin'ny marika akanjo. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, diniho ny fomba fanontana kalitao avo lenta izay manohitra ny fahasimbana, ny fihenan'ny loko ary ny fanasana mari-pana avo lenta. Noho izany, atolotray ho an'ny maha-izy azy mafy amboradain'ny solosaina. Manasa anao izahay hitsidika ny magazay an-tserasera www.pm.com.pl na amin'ny Allegro "Mpamokatra-BHP".
tampon'ny tanky amin'ny asapalitao asatampon-tanky misy logotampon-tanky misy pirintypalitao fiasan'ny vehivavypalitao arabeakanjo ho an'ny lehilahypalitao miaropalitao vita amin'ny insulated an'ny lehilahyakanjo vita amin'ny voaroypalitao vita amin'ny insulated an'ny lehilahypalitao asa taratrapalitao asaasa fitoriana Allegropalitao asa fahavaratraakanjo vita amin'ny voaroypalitao asa taratrawork vests olxakanjo vita amin'ny pirintyakanjo ririninapalitao asaakanjo akanjo